निषेधाज्ञा र लकडाउनलाई ध्यामा राखेर क्लासिकटेक ल्यायो ‘तुफान’ अफर — onlinedabali.com
काठमाडौँ । नेपालको अग्रणी तथा ठुलो ईन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था क्लासिकटेकले ‘तुफान’ अफर सार्वजनिक गरेको छ। कोभिडका कारण नेपाल सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा तथा लकडाउनमा सेवा ग्राहीको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै कम्पनीले ‘तुफान’ अफर सार्वजनिक गरेको हो। घरमा बसेर गरिने अनलाइन जब र अनलाइन क्लासलाई ध्यानमा राखी ‘तुफान’ अफर सार्बजनिक गरेको हो।
नेपालको अग्रणी तथा ठुलो ईन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था क्लासिकटेकले आफ्नो ‘तुफान’ अफर सार्वजनिक गरेको छ। कोभिडका कारण नेपाल सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा तथा लकडाउनमा सेवा ग्राहीको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै कम्पनीले तुफान अफर सार्वजनिक गरेको हो। घरमा बसेर गरिने अनलाइन जब र अनलाइन क्लासलाई ध्यानमा राखी ‘तुफान’ अफर सार्बजनिक गरेको हो।
उक्त अफरमा सेवाग्राहीले ५० Mbps देखि १०० Mbps सम्मको हाइ स्पिड ईन्टरनेट र फ्री IPTV पनि पाउनेछन्। उक्त तूफान अफरमा ५० mbps अन्तर्गत प्रती महिना रु= १२५० को दरमा १ बर्षको लागि रु. १५००० रुपैयाँ (भ्याटबाहेक) जसमा २ IPTV निशुल्क हेर्न पाइनेछ तथा ८० tbps अन्तर्गत ३ IPTV सम्म प्रति महिना रु. १४०० का दरले रु १६८०० र १०० mbps अन्तर्गत ३ IPTV सम्मप्रती महिना रु. १८०० को दरले रु.२१६०० मा जडान गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
क्लासिकटेकको इन्टरनेटसंग IPTV को ५० भन्दाबढी HD च्यानलहरु र १०० SD च्यानलहरु नि:शुल्क हेर्न पाउनुहुने छ। साथै सबै पुरानो तथा नयाँ टि.भी मा पनि Youtube हेर्न पाइनेछ । ।
यति मात्र नभइ कम्पनीले आफ्नो पुरानो ग्राहकहरुको लागि रिचार्ज अन्तर्गत तूफान रिचार्ज अफर प्याकेज पनि सार्बजनिक गरेको छ। जस अन्तर्गत पुरानो ग्रहक ले कुनै पनि प्याकेज तूफान ५० Mbps, तूफान ८० Mbps र तूफान १०० Mbps मा रिचार्ज गर्न पहुनेछ। ३०% सम्म क्यास डिस्काउन्ट प्राप्त गरी रु. १०४५८ बाचाउनु हुने छ भने २ महिना बोनस पनि प्राप्त गर्नु हुने छ। सथै अन्य प्याकेज अफरहरु का लागि कम्पनीको सम्पर्क नम्बर ९८०१००४४७७ मा सम्पर्क गर्न सकिने छ ।
कम्पनीका प्रमुख सेल्स एण्ड मार्केटिङ म्यानेजर बिनय कुमार अधिकारीले इलेक्ट्रोनिक अत्याधुनिक डिजिटल प्राविधि IPV6 मोडेलमा बिस्तार गराउन सफल क्लासिकटेक ईन्टरनेट कम्पनी भरपर्दो र गुणस्तरीय रहेको र यसै अनुसार सेवा दिइदै जानकारी दिएका छन् । ठूलो नेटवर्क रहेको क्लासिकटेकले १०३ वटा शाखा बिस्तार गरि सेवा प्रबाह गरिरहेको जानकारी अधिकारीले दिए ।